Maqaal: Soomaaliya ka warran? Q3AAD
Waxaa lagu jiraa xilli kala guur ah, xaajadu waa geeddi weliba la looyaaminayo, ma jiro sahan rasmiya, oo geeddiga ka horreeyey, deegaanka loo guurayo ee guurtidu ku heshiisay lama yaqaan, biyihiisa, baadkiisa iyo sida xaalkiisu yahay, keliya waa guuritaan, dadka guuraya waa dad aan wax sahay ah iyo wax saad ah midna haysan, gaadiidkay ku guurayaan kuma filna, mana jirto cid odorostay oo si wanaagsan u hillaadisay halkay ku furan lahaayeen.
Suudi: Waxaa la yidhi Dastuurka ayaa laga waayey dalka meesha magaalo madax u ah, waxaan maqlay ninbaa hadda ka hor la yidhi, isagoo dul fadhiya xoola badan oo biraysan: “War yaa sidan yeelay?” Markaasuu yidhi “Waa la qarin!” markaasaa lagu yidhi: “Haddii la sheegana?” wuxuu ku jawaabay: “Waa la go’i” markaa waxaa su’aashan oo kale la weydiiyey wasiirka dastuurka meesha ay Xamar ka baxday iyo waxa dastuurka looga saaray? Wuxuu ku jawaabay: “Cillad farsamo awgeed ayaa looga waayey” haddii cilladdii la weydiiyeyna, gadaal ayaan ka sheegi doona ayuu yidhi, Wallee waa yaab, xaalka Dastuurka wuxuu la mid noqday meesha laga dhihi jiray: “Sac nin maaley, oo Weyli nuugtay oo naagi xigatay”.
Sulub: Suudiyoow waa layna wadaa, waana taa la yidhi waa geeddi ee xaggee laynagu furayaa ayay kula tahay?.
Suudi: Waxaa la yidhi: nin cudurka Qaaxada ama Feedhaha qaba(TB)ayaa aad u qufacay ilaa uu la foorarsaday, nin aan aad u aqoon ayaa yidhi (Shifo, Saxa) Ninkii ayaa markuu qufacii dhamaystay ayuu yidhi: Adeer shifo iyo saxa mar hore ayaa lagala quustay markaa Sulubooy Faataxo ku meelgaar iyo ka meelgaar, murashax, doorasho, shir beelleed iyo dib u heshiisiin mar hore ayaa ummaddan lagala quustay, ee waxaan arki doonnaa halkay ku danbayso, Bal aan aragno Uuraysataye waxay umuli doonto.